Injini Engcono Kakhulu Yokubhuka Yewebhusayithi Yakho Yokuqasha Iholide
Izici » Injini yokubhuka
Injini yokubhuka ingahlanganiswa kalula namawebhusayithi avela eceleni ukuqinisekisa ukuthi izivakashi ezingaba khona zinokuhlangenwe nakho okushelelayo okushelelayo. Lesi sici esimangalisayo silapha ukukhuphula ukuguqulwa kwakho futhi uthathe ukuphathwa kwempahla yakho kuya ezingeni elilandelayo.
Njengoba izindawo zokufakwa kuhlu online kanye namakhomishini we-OTA angaba phezulu ngama-20%, okuvame ukulingana cishe no-50% wemali etholwe yimenenja yokuqasha iholide, ukubhuka okutholwe ngalezi ziteshi kubiza kakhulu. Njengomnikazi webhizinisi lokuqasha lesikhashana, kunjalo, ufisa ukukhulisa inzuzo yakho ngokunciphisa inani elikhokhelwe kumakhomishini. Noma kunjalo, akulula kangako ngoba udinga ukuba namathuluzi athile ukuze wenze kanjalo!
Ngisho nalapho abahlinzeki bezindlu abasizakele besethe khona iwebhusayithi abazoyibhuka ngqo abaphumelelanga kangako, njengoba amawebhusayithi wabo engenawo amanani aphilayo nokutholakala futhi asuselwa kwisisekelo sokubuza. Ngasikhathi sinye, izivakashi ezisetshenziselwa ukubhukha izingosi ezisheshayo zilindele umuzwa ofanayo kumawebhusayithi omsingathi.
Abahlinzeki abaningi be-software abakunikeza amanani abukhoma nokutholakala usebenzisa ukubhuka injini untula ezinye izici eziyisisekelo. Ezinye izinjini zokubhuka zinomklamo obonakala ubhajwe ekhulwini leminyaka elidlule. Abanye abakwazi ukuphatha izakhiwo zamayunithi amaningi. Iningi lalezi zinjini zokubhuka azinawo amandla okuvumela isivakashi ukuthi siseshe maphakathi nezindawo zomqashi oqashisayo ongaba nezakhiwo emadolobheni angaphezu kwelilodwa. Futhi kubonakala kungenakwenzeka ukuthola umhlinzeki ovumela ukulandelwa okufanele nge-Google Analytics noma i-Google Tag Manager, amathuluzi amabili abalulekile awo wonke amabhizinisi.
Ingasiza Kanjani Injini Yokubhuka kaZeevou?
EZeevou, siyakuqonda ukubaluleka kokubhukha okuqondile, futhi inhloso yethu eshiwo yilelo lokwenza I-Direct Booking Revolution! Ngakho-ke, sizibophezele ukukunikeza amathuluzi alula kakhulu angenza imisebenzi ebalulekile embonini yezivakashi. Isibonelo, ukwakha amathuluzi azokwenza abanikazi bezivakashi babo bonke osayizi bakwazi ukwandisa kakhulu inani lokubhukha abakutholayo ngaphandle kwesidingo somxhumanisi okhokhelwayo. Injini yethu yokubhuka iwubufakazi bokuzibophezela.
Injini yethu yokubhuka idonsa amanani abukhoma nokutholakala, kungaba kulawo afakwe ngesandla noma athunyelwe kithi ngenye yamanani ethu ashukumisayo ukusebenzisana nabalingani. Futhi, sinezindaba ezinhle kulabo abaphethe abasebenza emazweni omhlaba; injini yethu yokubhuka isekela nokusethwa kwemali eningi! Ngakho-ke, asikho isidingo sokukhathazeka ngokubhekana nezimali ezahlukahlukene.
Ozakwethu beZeevou bangasetha -add ukuthengisa imikhiqizo eyengeziwe noma izinsizakalo bese uzifaka njengengxenye yezinhlelo zamanani. Ababungazi bangakhetha ukusunduza uhlelo lokulinganisa kunjini yokubhuka kuphela, ukuze banikeze amadili akhethekile uma kuqhathaniswa nokunikezwa kwabo kuma-OTA. I-Zeevou ikuvumela ukuthi usethe Ukukhushulwa, nomngane amakhodi wevawusha ukuthi isetshenziswe ngenjini yokubhuka yamahhala ngokuphelele.
Kukhona okuningi okuningi kusici senjini yokubhuka sikaZeevou. Ungahlanganisa injini yethu yokubhuka eqondile ne -Google Analytics ukulandela umkhondo wethrafikhi kanye nezibalo zabantu. Lokhu kungasiza ekuqondeni okungcono of ikhasimende lakho ongaba nalo. Ngaphezu kwalokho, ukuhlanganiswa kwethu ne Isiphathi Somaka we-Google ivumela abasingathi ukuthi basebenzise injini yokubhuka yeZeevou ukulandelela ukugeleza kuwebhusayithi nokubhukha abakutholayo. Lokhu kusebenza ikakhulukazi lapho uzama ukuthola imbuyiselo yakho ekutshalweni kwe-PPC-Pay Per Click- Imikhankaso ye-Google Ad.
Ukubeka ukubhuka kuqondile impela. Konke isivakashi okufanele sikwenze ukufaka igama laso lokuqala, isibongo, nekheli le-imeyili. Uma ufisa, ungabacela futhi ukuthi bahambise inombolo yabo yocingo ukuze bakwazi ukubhuka. Ukunciphisa imininingwane eceliwe kusihambeli ngenkathi ubeka ukubhuka kuqinisekisa ukuthi ungathwebula imininingwane yezivakashi ezingaba ziningi ngangokunokwenzeka. Zeevou's Inqubo Yokuqinisekisa Ukubhuka Yezinyathelo Ezi-5 kunikeza izivakashi umuzwa wokuthi zibhuke ngaphandle kwenkinga kanye nokunakekela ukuqoqwa kwemvume yokukhangisa ehambisana ne-GDPR, izinkokhelo, amadiphozithi ezokuphepha kanye nokuqinisekiswa kwe-ID.
Kulabo abangafisi ukusebenzisa i-free ne ephelele iwebhusayithi yokubhuka eqondile enikezwa nguZeevou, injini yethu yokubhuka ingahlanganiswa kalula namawebhusayithi wesithathu. Ithimba lethu eZeevou lisungule WordPress Iwijethi, kanye ne-iFrame engafakwa kumawebhusayithi amaningi, kufaka phakathi lawo ahlinzekwe yi- I-Wix. Lokhu kuqondisa kabusha izivakashi ngokukhululekile ekubhukeni kweZeevou injini futhi ivumela izivakashi ukubeka ukubhuka ngokuchofoza okumbalwa nje.
Inqubo yokukhulisa ibhizinisi lakho usebenzisa isici senjini yokubhuka sikaZeevou ayinazinhlungu. Ngu ukucela i-demo yamahhala, uzothola ithuba lokuhlola okunye izici uZeevou unikeza futhi asize ibhizinisi lakho lithole indawo yalo kulo makethe wokuncintisana. Ungakhohlwa ukuthi yethu ithimba lokusekela lapha ukukusiza uma unemibuzo.